सामुदायिक विद्यालयमा अंग्रेजी माध्यमबाट पठनपाठन शुरु, विद्यार्थीको संख्या बढ्दै ! | Seto Khabar
सामुदायिक विद्यालयमा अंग्रेजी माध्यमबाट पठनपाठन शुरु, विद्यार्थीको संख्या बढ्दै !
२०७५ बैशाख २६, बुधबार (३ साल अघि)
बैतडी, बैशाख २६। सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या न्यून भएर बन्द हुने अवस्थामा पुगेपछि बैतडीका केही सामुदायिक विद्यालयले नयाँ शैक्षिक सत्रदेखि अंग्रेजी माध्यमबाट पठनपाठन शुरु गरेका छन् । अंग्रेजी माध्यमबाट पढाइ हुने निजी विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या बढ्दै जान थालेपछि सामुदायिक विद्यालयले पनि अंग्रेजी माध्यमबाट पठनपाठन शुरु गरेका हुन्।
जिल्लाको दोगडाकेदार गाउँपालिकामा पनि शैक्षिक सत्र २०७५ देखि केही विद्यालयमा अंग्रेजी माध्यमबाट पठनपाठन शुरु गरिएको छ । दोगडाकेदार गाउँपालिकाको वडा नं ३, श्रीकोटमा रहेका दुई सामुदायिक विद्यालयमा अंग्रेजी माध्यमबाट पढाइ शुरु गरिएको हो । खोचलेकमा रहेको सनातन धर्म मावि र खिरेगाउँमा रहेको केदारनाथ आधारभूत विद्यालयमा अंग्रेजी माध्यमबाट पठनपाठन शुरु भएको सम्बन्धित विद्यालयले जनाएका छन् ।
सनातन धर्म मावि, खोचलेकमा कक्षा १ देखि ३ सम्म र केदारनाथ आधारभूत विद्यालयमा बालविकास र कक्षा १ मा यस शैक्षिक सत्रदेखि अंग्रेजी माध्यमबाट पढाइ शुरु गरिएको हो । आधुनिक युग सुहाउँदो शिक्षाको आवश्यकता रहेकाले अंग्रेजी भाषाको पठनपाठन शुरु गरिएको सनातन धर्म माविका प्रधानाध्यापक बलदेव नाथले बताउनुभयो । समयानुकूल शिक्षा प्रदान गर्नका लागि अंग्रेजी माध्यमबाट पढाइ शुरु गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
यस्तै, गत शैक्षिक सत्रसम्ममा विद्यार्थी संख्या न्यून भएको केदारनाथ आधारभूत विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या बढाउन अंग्रेजी माध्यमबाट पठनपाठन गरेको प्रधानाध्यापक शंकरराम ओडले जानकारी दिनुभयो । सामुदायिक विद्यालयतर्फ विद्यार्थीको आकर्षण बढाउन अंग्रेजी माध्यमबाट पढाइ गर्दा विद्यार्थी संख्या बढ्ने उहाँको भनाइ रहेको छ ।
सनातन धर्म मावि विसं २०१७ मा स्थापना भएको हो भने केदारनाथ आधारभूत विद्यालय विसं २०४३ मा स्थापना गरिएको हो । पछिल्लो समय देखासिकीको आधारमा निजी विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण बढ्दो र बसाइँ सरेर तराई जानेक्रम बढी भएकाले पनि सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी घट्दै गएका छन् ।
बैतडीका अधिकांश सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या न्यून भएर विद्यार्थीको संख्या घट्दै गएको छ । सरकारले अर्बौं रुपैयाँ लगानी तथा खर्च गरेर सामुदायिक विद्यालय सञ्चालन गरिरहे पनि स्तर घट्दै गएकाले पढाइको गुणस्तरमा सुधार ल्याउन आवश्यक रहेको जानकारको भनाइ रहेको छ ।
सामुदायिक विद्यालयको स्तर खस्किँदै गएपछि विद्यार्थीको आकर्षण निजी विद्यालयमा आकर्षित हुन थालेको छ । पढाइ पनि गुणस्तरीय हुने भन्दै अभिभावकको रोजाइ निजी विद्यालयमा जान थालेको हो । रासस
भोलिदेखि त्रिविका सबै परीक्षा स्थगित
पछिल्लो २४ घण्टामा ९८ जनामा बालबालिकामा कोरोना संक्रमण पुष्टि
शैक्षिक कार्यक्रम लिएर भारतको एल युनिभर्सिटीको टीम नेपालमा
विद्यालय बन्द गर्ने हाेइन सावधानी अपनाएर सञ्चालन गर्नुपर्छ : प्याब्सन
देशभरका सबै शैक्षिक संस्था ४ दिन बन्द गर्ने सरकारको निर्णय
बेलायती शैक्षिक प्रणालीको बारेमा जानकारी गराउन राजधानीमा एडभोयको एजेन्ट कनकेल्भ